Ronaldo Oo Beddelaya Mbappe, Liverpool Oo Dib Usoo Ceshanaysa Suarez, Xiddig Man United Ah Oo Laba Kooxood Isku Haystaan & Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaRonaldo Oo Beddelaya Mbappe, Liverpool Oo Dib Usoo Ceshanaysa Suarez, Xiddig Man United Ah Oo Laba Kooxood Isku Haystaan & Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka
Ronaldo Oo Beddelaya Mbappe, Liverpool Oo Dib Usoo Ceshanaysa Suarez, Xiddig Man United Ah Oo Laba Kooxood Isku Haystaan & Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka
April 11, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Wargeysyada ciyaaraha ayaa si joogto ah usoo bandhiga xogta, xanta iyo dhaqdhaqaaqa suuqa, waxaananu idiinka soo xulnay qodobbadii ugu waaweynaa ee ay qoreen maanta oo Axad ah.
Weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane oo 27 jir ah ayaa ku qasbaya kooxdiisa in ay iibiso xagaagan haddii aanay usoo gudbin tartanka Champions League ee xilli ciyaareedka dambe. (Athletic)
Wakiilka caanka ah ee Mino Raiola ayaa qorshaynaya in weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland oo 20 jir ah uu ka dhigo ciyaartoygii ugu horreeyey ee £1 milyan oo Gini mushahar u qaata usbuucii. Tani waxay meesha ka saari doontaa xiisihii ay kooxaha Yurub u hayeen laacibkan, marka laga reebo Man City iyo PSG oo lacagta Carabta haysta. (Mirror)
Luis Suarez ayaa lala xidhiidhinayaa in uu dib ugu laabanayo Liverpool kaddib toddoba sannadood oo uu ka maqnaa Anfield. Waxa kale oo doonaysa kooxda reer Maraykan ee Inter Miami ee uu iska leeyahay David Beckham. (Todofichajes)
Liverpool waxay muujisay damac ka haya kubbad-sameeyaha Barcelona ee Pedri oo ay da’diisu tahay 18 jir, kaas oo kooxdiisuna ay ka saxeexayso qandaraas cusub oo lagu burburin karayo £350 milyan oo Gini. (Mirror)
Manchester United ayaa liiska ciyaartoyda ay doonayso ku darsatay khadka dhexe ee Wolves ee Ruben Neves oo 24 jir ah. Xogan ayaa timid xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in Wolves ay diyaar u tahay in ay iibiso xiddiga reer Portugal. (90min)
West Ham waxay doonaysaa in ay si rasmi ah ula saxeexato Jesse Lingard oo ay amaah kaga soo qaadatay Manchester United, laakiin waxa ku haysata Arsenal. 28 jirkan reer England ayaa Hammers ku biiray bishii January, waxaanu soo bandhigay ciyaaro heersare ah. (Star)
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo 36 jir ayaa doonaya in uu ku biiro Paris Saint-Germain haddii uu weeraryahanka Kylian Mbappe uga wareego Real Madrid. (Tuttosport)
Real Madrid ayaa hoggaaminaysa tartanka loogu jiro xiddiga reer France ee Kylian Mbappe, waxaanay xagaagan ka gudbin doontaa dalab. (AS)
Weeraryahanka xulka Talyaaniga iyo Everton ee Moise Kean oo 21 jir ah, amaahna ugu maqan PSG ayaa lala xidhiidhinayaa Juventus oo uu hore ugu ciyaari jiray. (Tuttosport)
Manchester United iyo Leeds ayaa noqday kooxihii ugu dambeeyey ee ku biiray tartanka loogu jiray 18 jirka difaaca Kyron Gordon oo u ciyaara Sheffield United. Everton iyo Liverpool ayaa hore loola xidhiidhinayay da’yarkan Ingiriiska. (Mail)
Manchester United waxa kael oo ay doonaysaa goolhayaha reer England ee West Brom ee Sam Johnstone. 28 jirkan ayaa Old Trafford ka tegay 2018. (Sun)
Arsenal ayaa xidhiidh la samaysay Fluminense oo ay ka doonayso 19 jirka reer Brazil ee khadka dhexe ee Matheus Martinelli oo ay sidoo kale doonayso Manchester United. (Globo Esporte)
Tababaraha Everton ee Carlo Ancelotti ayaa bartilmaameed ka dhigtay difaaca Napoli iyo xulka Senegal ee Kalidou Koulibaly oo 29 jir ah, waxaanu doonayaa in uu isku daro Yerry Mina iyo lacag si uu u heli karo difaacan. (Tuttomercatoweb)
Weeraryahanka reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic oo 39 jir ah, ayaa qarka u saaran in uu dhamaystiro heshiis cusub oo uu u saxeexo AC Milan, sida uu sheegay halyeygii kooxdaas Paolo Maldini oo hadda ah agaasimaha ciyaaraha ee Milan. (Sky Italia).